မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီမြို့မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, May 22, 2016 Android, News, ကျိုက္ခမီမြို့သတင်း No comments
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး၏ ဘလော့များ - ၁. မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီအင်တာနက်စာကြည့်တိုက်
၂. မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး၏ Facebook Pageများ - ၁. မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီအင်တာနက်စာကြည့်တိုက်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး၏ Website ( with Free Domain Name) - ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး၏ ကျိုက္ခမီမြို့ YouTube Channel - ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်း YouTube Channel
တို့၏ Admin တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ရန်ေ်အာင်မြေရပ်ကွက် သာယာကုန်း(၁)လမ်း ဦးသားငယ်+ဒေါ်မီးတို့၏သားဖြစ်ပါသည်။
ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်းတွင် ကျိုက္ခမီမြို့နဲ့ပက်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေကို သီးသန့် ဆက်လက်တင်သွားပေးပါမည်။
အင်တာနက်စာကြည့်တိုက်တွင် သတင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဗဟုသုတ၊ နည်းပညာတွေကိုလည်း လေ့လာလို့ရအောင် ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမည်။
ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံဘွဲ့ရတစ်ယောက်အဖြစ်န်ှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် Guest Relational Officer (GRO) + Reservation Manager + Receptionist + Web Developer + IT တစ်ယောက်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည့်လာအောင် ဆက်လက်ကြိုးစားခွင့်ပေးနေသော သူငယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ကနေ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့ထိ ပညာသင်ထောက်ပံ့ပေးပါသော ဖေဖေ မေမေ အဘ ကိုကြီး ကိုငယ် ညီလေး အားလုံး ကို ကျေးဇူးကြီးပါကြောင်း နှင့် အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ...သက်တော်ရာတော်ရှည်ပါစေ။
သာသနာ့ဝန်ကို ခန္ဓာ့ဝန်ကို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။
သူငယ်တန်းမှ ဘွဲ့ရအထိ ပညာသင်ကြားပေးပါသော သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ အားလုံးကိုလည်း ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ...သက်တော်ရာတော်ရှည်ပါစေ။
ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်းနဲ့ပက်သက်သည့် Up To Date သတင်းများကို အနီးကပ် ဆွေးနွေးပို့ပေးပါသော ကိုပြည်စိုး၊ ကိုသက်ဝင်းပိုင်၊ ကိုချစ်မင်းကို တို့ကို အထူးပင် ကျေးဇူတင်ရှိပါကြောင်း။
ဆက်လက်ပြီးလည်း တင်ပေးပါဦးလို့ :-)
ကိုပြည်စိုး - ကျိုက္ခမီမြို့ဟိတကာရီဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များနာရေးကူညီမှုအသင်း Facebook Page Admin
ကိုသက်ဝင်းပိုင်- ကျိုက္ခမီမြို့ဟိတကာရီဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များနာရေးကူညီမှုအသင်း Facebook Page Admin
ကိုချစ်မင်း- ကျိုက္ခမီမြို့လုံးဆိုင်ရာ မန်းရတနာ နာရေး ကူညီမှုအသင်း Facebook Admin
ကျိုက္ခမီမြို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတော်တော်များများကို အမြဲတမ်း ရိုက်ပြီးပို့ပေးပါသော ကိုကျော်ဟိန်းအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ကျိုက္ခမီမြို့သမိုင်းနှင့် ရေလယ်ဘုရားသမိုင်း Information များကို ပို့ပေးပါသော မမ - ဆရာမ မသန့်ဇင်ဦး (ဗုဒ္ဓ ​စာသင်​​ကျောင်း၊ ကျိုက္ခမီမြို့) အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်းဝက်ဆိုဒ်အတွက် အဆင်ပြေမပြေ အကြံပေးပါသော ကို ခင်မောင်စိုး (IT နည်းပညာ)အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ဆက်လက်ပြီးလည်း အကြံပေးပါဦးလို့ :-)
ကျိုက္ခမီသား ကိုခင်မောင်စိုး၏ နည်းပညာဘလော့
ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်းဝက်ဆိုဒ်အတွက် အဆင်ပြေမပြေ အကြံပေးပါသော ကိုမင်းနေဇော် ( Web Developer)အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ကျိုက္ခမီမြို့Up to Date သတင်းများ ဓါတ်ပုံများကို အစဉ်မပြတ် ပိုစ့်တွေ တင်ပေးပါသော Facebook သုံး ကျိုက္ခမီမြို့သူ/သား များနှင့်တကွ Groups အသီးသီးမှ Admin များ အဖွဲ့ဝင်များအား ကျွန်တေ်ာအဲဒီပို့စ်တွေကို ပြန်ကူးယူခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...
ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်းကို ၀င်ဖတ်ပေးကြသော မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။။။
ကျိုက္ခမီမြို့သူ/သားများ များများတင်ပေးမှသာလျှင် ကျိုက္ခမီမြို့အတွက်လုပ်ထားသော ဘလော့နှင့် သိပ်မကြာခင် ကိုယ်ပိုင် Domain Name နဲ့ ကျိုက္ခမီမြို့ ၀က်ဆိုဒ်လေးတစ်ခုအတွက်ရလာမည့် ဆိုဒ်တွေတွင် ကျိုက္ခမီမြို့Information ကို သိချင်တဲ့သိအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ကျိုက္ခမီမြို့ရှိ တည်းခိုခန်းများတွင် Online Reservation System ကိုထည့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတော့ Reservation အတွက် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို တင်ပေးထားပါသည်။
ဖုန်းအတွက် apk ကို ဒေါင်းနိုင်ပါ၏
(သိပ်မကြာခင် play store မှာလည်း ဒေါင်းလို့ရအောင် ထည့်ပေးသွားပါမည်။)